San Francisco nevamwe vanyori vana vakatumidza zvakafanana. Zvimedu zvemabasa. | Zvazvino Zvinyorwa
Nhasi ndi 4 yeOctober, mabiko e San Francisco de Asis, mutsvene weItaly zvakare patani yemhuka. Saka ndinomurangarira nechidimbu chebasa rake rine mukurumbira, Canticle yezvisikwa. Uye ndinorangarirawo zvevamwe Vanyori vana vakatumidza zvakafanana: Francisco Umbral, Francisca Aguirre, Francesco Petrarca naFrancis Scott Fiztgerald.
1 Canticle yeZvezvisikwa - Francis weAssisi
2 Unofa uye pingi - Francisco Umbral
3 Chapupu chekusarudzika - Francisca Aguirre
4 Sonnet kuna Laura - Francesco Petrarca
5 Mukuru Gatsby - F. Scott Fitzgerald
Canticle yezvisikwa - Francis weAssisi
Wekumusoro-soro uye Wemasimbaose akanaka Ishe,
nderako rumbidzo, nembiri, nerukudzo uye nemaropafadzo ese.
Kune iwe wega, Wekumusoro-soro, zvinokodzera iwe
uye hakuna munhu anokodzera kukudana.
Rumbidzwai imi, Ishe wangu, mune zvisikwa zvenyu zvese,
kunyanya mukoma zuva,
uyo waunotipa zuva uye wotivhenekera.
Uye rakanaka uye rinopenya nekubwinya kukuru,
zvako, Wekumusoro-soro, zvinotakura kukosha.
Wakarumbidzwa iwe, Ishe wangu, kuburikidza nasisi mwedzi nenyeredzi,
mumatenga makavaita kuti vaonekwe uye vakoshe uye vakanaka.
Rumbidzwai imi, ishe wangu, kuburikidza nemukoma mhepo
uye nemumhepo uye gore uye nedenga rakadzikama uye nemamiriro ekunze ese,
kuburikidza navo vese iwe unopa chikafu kune zvisikwa zvako.
Wakarumbidzwa iwe, Ishe wangu kuburikidza naSista Mvura,
inozvininipisa kwazvo, inokosha uye yakachena.
Wakarumbidzwa iwe, Ishe wangu, kuburikidza nehama moto,
yamunovhenekera nayo usiku,
uye runako uye runofadza uye rune simba uye rwakasimba.
Inouraya uye pingi - Francisco Umbral
Ini ndakangowana chokwadi chimwe chete muhupenyu, mwanakomana, uye ndiwe. Ini ndakangowana chokwadi chimwe chete muhupenyu uye ndakachirasa. Ndinorarama kubva mukuchema kwamuri usiku nemisodzi inopisa rima. Murwi mudiki mutsvuku anotonga pasi rose, ndakakurasa nekusingaperi. Maziso ako akatetepa bhuruu redenga. Bvudzi rako rakashongedza kunaka kwezuva. Chasara mushure mako, mwanakomana, is a fluctating the universe, as consistency, as they say Jupiter is, a seuseating vagueness of the summer and chinters, a uniscuruity of sun and sex, of time and death, through all of which I wander only because I handizive chiratidzo chekuita kufa. Kana zvisiri, aizoita chiito icho uye hapana chimwe chinhu.
Kupusa kuzere kwezuva. Ndiani uyu denga rebhuruu achipusa, masikati ano nekuseka?
Chapupu chekusiiwa - Francisca Aguirre
Gungwa, gungwa ndizvo zvandinoda.
Gungwa uye hapana chimwe chinhu, hapana chimwezve.
Zvimwe zvacho zvidiki, hazvina kukwana, murombo.
Kwete gomo, rwizi, denga.
Kwete, hapana chinhu,
Ini handidi maruva, maoko futi,
kwete moyo wekundinyaradza.
mukutsinhana nemumwe moyo.
Handidi kuti vataure neni nezverudo
Sonnet kuna Laura - Francesco Petrarca
Handigoni kuwana rugare uye handigoni kuita hondo,
uye ndinotsva uye ndiri chando; uye ndinotya uye nekumbomira mberi;
uye ndinobhururuka pamusoro penyika uye ndinorara pasi;
uye hapana chakasvinwa uye munhu wese akambundirana.
Ani naani anondichengeta mutirongo, haavhure kana kuvhara,
kana kundibata kana kusunungura musungo;
uye rudo harundiuraye kana kundibvisa,
haundide kana kubvisa pamuviri pangu.
Ndinoona pasina maziso uye pasina rurimi ndinochema;
uye ndinokumbira rubatsiro uye ndinotarisa kusuwa;
Ini ndinoda vamwe uye ndinonzwa kuvengwa ini pachangu.
Kuchema ini ndinodanidzira uye kurwadziwa kunofamba;
kufa nehupenyu zvinondimutsa zvakaenzana;
Kwamuri ndiri, Mukadzi, mune ino mamiriro.
Mukuru Gatsby - F. Scott Fitzgerald
Pandakanga ndiri mudiki uye ndisinganetseki, baba vangu vakandipa rairo yandisina kumira kufunga nezvayo kubva ipapo.
"Pese paunonzwa kuda kushoropodza mumwe munhu," akadaro, "rangarira kuti havazi vese vakapiwa zvivakwa zvakawanda senge iwe."
Ndicho chinhu chega chaakataura, asi sezvo isu takagara tichiudzana zvese pasina kupa kwedu kungwara, ndakanzwisisa kuti chirevo chake chine chirevo chakazara. Mhedzisiro ndeyekuti ini ndinowanzo kusatonga chero munhu, tsika yakandiita kuti ndishamwaridzane nevanhu vazhinji vanonakidza uye yakandiitawo kuti ndive nyajambwa wevazhinji vashoma inveterate bullshit.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » San Francisco nevamwe vanyori vana vakatumidza zvakafanana. Zvimedu zvemabasa.